Ukuqhubeka okanye ukuHanjiswa ngesandla kweMac ngaphambi kowama-2012 | IPhone iindaba
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ndapapasha ifom ye- sebenzisa i-Handoff kwi-iPhone yakho, kwi-iPad nakwiMac, kodwa kwangaxeshanye sabona ukuba uninzi lwethu alunayo iMac yamva kwaye ngenxa yoko asizukukwazi ukonwabela le ngenelo.
Emva kokuphanda Kukho iindlela ezimbalwa onokukhetha kuzo Oko kunokwenziwa ukulungela lo msebenzi ngaphandle kokuthenga isixhobo esitsha, esingafanelekanga kwiipesenti ezingama-99 zamatyala.
Imvelaphi yokuba yingxaki yile Bluetooth, kude kube ezo zenziwe phakathi ku-2011 zenziwe kunye I-Bluetooth 2.1 + ERD Umgaqo olandelwayo osisiseko owasasazwa kwi 2007. Ukucanda i Inguqulelo 3.0 ka-2009 kunye no-4.0 ka-2010.
Sicinga ukuba iimfuno ebekucingelwa ukuba ziyafuneka bezi iphawulwe ngamacandelo e-desktop kunye nokunye okuncinci, ke ngoko uguqulelo 2.1 luhlangabeze ibhendi yeemfuno eziqikelelweyo kudluliso lwe- 3 megabit ngomzuzwana ngelixa zonke iinguqulelo zamva zikwi 24 megabit ngomzuzwana.
Ukuba yinkqubo yonomathotholo, uhlobo lwayo lunokulinganiswa ngokusekwe kwi Amandla aphezulu kwaye ke eyakho fikelela. Ziziiklasi ezintathu: Udidi 1 ngamandla e-100 mW kunye noluhlu lweemitha ezingama-30, Udidi 2 2.5 mW amandla kunye noluhlu lwe-5 ukuya kwi-10 yeemitha kunye Udidi 3 ngamandla e-1 mW kunye nemitha enye kuphela yoluhlu.
Inguqulelo efunekayo ukuze isetyenziswe Isandla ngu-4.0, ebandakanya IBluetooth yakudala, i Isantya esiphezulu seBluetooth (Esekwe kwi-WiFi) kunye neenkqubo ze Amandla aphantsi eBluetooth (I-Bluetooth Low Energy okanye BLE, esebenza ngesitaki kunye nomgaqo wayo mtsha ujonge ukwenza amakhonkco alula ngokukhawuleza).
Ingxaki kukuba le nkqubo yeBluetooth kwiikhompyuter ze phakathi ku-2011 zakhiwe ngaphakathi kwaye abayi kufuna ukuyitshintsha nakweyiphi na ivenkile esemthethweni, nangona kunjalo, kukho iindlela ezimbini zokuphucula i-BT kwaye uzame ukufumana ukusebenza kweHandoff:
1 Ngokusebenzisa iadaptha ye-BT 4.0 yangaphandle nge-USB.
2 Guqula ibhodi ye-BT
3 Iingcebiso zengcali
Ngokusebenzisa iadaptha ye-BT 4.0 yangaphandle nge-USB.
Kukhetho lweNkqubo, kufuneka uqinisekise ukuba ifayile ye I-BT yamkelwe kwaye iyasebenza.
Khetha nge isiphene.
Kuya kufuneka uxelele inkqubo usebenzisa inkqubo ye- Indawo yokukhwelela ngokulandelelana «I-sudo nvram ibluetoothHostControllerSwitchBehavior = »rhoqo»«
Le nkqubo isebenze kwezinye iinkqubo kwaye kweminye ishiye imijelo ngaphandle unxibelelwano.
Guqula ibhodi ye-BT
Kwi-21,5 intshi iMac ukusukela phakathi ku-2011 kukho ifayile ye Isikhokelo kwi-iFixit de ungayitshintsha njani ibhodi enebluetooth kwelinye kunye nohlobo 4.0 lwenkqubo.
La Isikhokelo se-27 intshi yenguqulo, kodwa iMac ukusukela phakathi ku-2010, nawe unayo kwiqonga elinye. (Enkosi Ii-MBerries ngomrhumo)
Emva kokuthetha ngeGenius ezininzi ezivela kwiVenkile yeApple bacebisile ukuba, ngaphandle kokuba unolwazi oluphezulu, ungazibandakanyi nokutshintsha ipleyiti. Ngokunjalo, enye inkqubo inokukuxabisa i-euro ezingama-10 kodwa lahla ibug ingasebenza kwi-iMac yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 8 » Ukuqhubeka okanye ukuHanjiswa kweeMac ngaphambi kuka-2012
Isikhokelo kwii-intshi ezingama-27 zeMac Mid 2010
Enkosi MBerrios, khange ndiyifumane, ndiyifaka kwisithuba.
Konke okugqibelele !!
Kwaye abo kuthi baneMacbook Pro ukusukela ngo-2010 abanakho ukutshintsha i-chip ye-Bluetooth? Ngaba ixabisa i-usb yebluetooth?
Ewe unakho, enyanisweni kwiwebhu kukho ulwazi oluthe kratya malunga neelaptops kunidesktops… unesikhokelo kule khonkco:
Ulwazi olukhulu uCarmen.
Lumka ukuba ikhonkco lele-MacPRO 2010 kwaye umbuzo kaJose wawenzelwe iMacbook Pro which apho ndinomdla naye hehe.
Kwaye abo kuthi bane-iMac ukusukela ngo-2009 kunokwenzeka ukuyitshintsha?
Makhe sibone ukuba ithatha ixesha elingakanani ukugxeka le post ... igalelo elihle kakhulu, Carmen, enkosi.
Ungazifumana phi iibhodi ze-BT 4.0? Oko kukuthi, yintoni ireferensi yecandelo ...
Isalathiso sikwisikhokelo esinye, kuxhomekeke kwikhompyuter yakho, kwaye banokuthengwa kwi-iFixit efanayo okanye bathathe umngcipheko nge-eBay.
Ukuba awuqinisekanga, buza iFixit kwaye baya kukuphendula ngephanyazo.
Jonga iphepha le-iFixit kwaye andifumani ukuba ibhodi ye-4.0 iphi imodeli ephakathi ka-2011 ukuba ungabeka ikhonkco kungangcono
UManuel Gallego sitsho
Kwi-Mac med 2011 akukho mfuneko yokutshintsha ibhodi kuba iBluetooth yakho iyi-LE kwaye iyahambelana ungayibona apha: malunga nale Mac> ulwazi lwenkqubo> izixhobo zekhompyutha> iBluetooth.
Kwenzeka ntoni ukuba iApple ayikhange isebenze kwiiMacs ukusukela ngo-2011, andazi ukuba kutheni kodwa inokusebenza kwaye akukho chip kufuneka itshintshwe.
Kule tutorial bayakuchaza:
Phendula uManuel Gallego
Enkosi !! Khange ndibubeke obu butyebi kuba iMac yam ukusukela phakathi ku-2011 khange isebenze kwaye kuba bekungekho zimvo bendingazi ukuba ndim ndedwa okanye ngumntu wonke.
Kuyatshiwo ke, kukho indlela yesithathu yeHandoff, enkosi ngegalelo !!
(Qaphela; ndisusile elinye lamagqabantshintshi, ukuba uliphindaphindile, ndiyathemba ukuba awunangxaki ...)
Ndizamile nge-iMac phakathi ku-2011 kwaye ayisebenzi, ngoku isifundo sithi kuphela senzelwe imacboockair kunye neMac mini
Molo! Gcina ukhumbula ukuba inyathelo le-12.13,14, 15, XNUMX kunye ne-XNUMX kufuneka lenziwe kwi-Mac-XXX yokuqala ... Kwaye kweyokugqibela ebonakalayo, ndoyisakele apho kwaye enye into endisileleyo yayikukuguqula iphepha kunye nesiphelo imiyalelo sele yahlukile kwaye ayisebenzi.
Ngendlela, kwinkqubo ye-0xED akukho sidingo sokukhangela kunye nokutshintsha, kunokwenziwa ngesandla. Iluncedo kwinyathelo elilandelayo lokutshintsha amanani eMacBookAir1,1 njl.
Ndiyathemba ukuba iyandisebenzela, yayigqibelele kum.
Ukufumanisa ukuba iMac iyahambelana, cofa kwi (iapile yasekhohlo ngasentla) > malunga nale Mac> ulwazi lwenkqubo> izixhobo zekhompyutha> iBluetooth
Kwaye kufuneka ubeke apho
Inguqulelo ye-LMP: 0x6
I-Bluetooth LE: ewe (ixhaswe)
Ukuba oko kuyavela, kunokuba luncedo.
Umnqweno omhle. Konke okugqibelele !!!
Wamkelekile!! Khange isebenze kum okokuqala xa utshintsha idatha yokubini nge-0xED kufuneka ulumke kakhulu ukubeka yonke into ngokuchanekileyo kodwa okwesibini ndiyenzile iyasebenza!
UCarmen noManuel: uzinkwenkwezi ezinkulu! 🙂
Andinayo iMac okwangoku kodwa sisihloko esihle.
Ngaba inokwenziwa kanye nge-ipad 3?
Andifumani modeli yebhodi ye-BT 4.0 ye-iMac ye-27-intshi ye-2010, ukuba umntu unedatha ndingayixabisa.
Iposi elungileyo! Akukho nto malunga ngasekupheleni kuka-2008 iiMacbook, akunjalo? Ndijonge kwakhona "ii-macrumors" kodwa azibeki nto. Ndicinga ukuba umatshini wam ungaphezulu kokuphelelwa lixesha ngaphandle kokusebenza kakuhle noYosemite. ngokubhekisele!
nkosazana embi sitsho
Ngaba sikhona isiqinisekiso kwimodeli ethile yeadaptha ye-USB esebenzayo?
njengedatha, le yimodeli yekhadi yokuthengela iMacbook pro ngasekupheleni kuka-2011 (eyam xD).
Ndivela eChile kodwa ndiza kuyalalela e-US okanye eYurophu (nokuba kuya kuthatha inyanga e-1)
IbroadCom BCM94331PCIEBT4AX BCM4331
Uxolo yimodeli ye-BCM94331PCIEBT4CAX
Awuyazi imodeli ye-27-intshi iMac phakathi ku-2010
Molo, oku kuyasebenza kwincwadi ye-mac ngo-2011, kufuneka ndenze ntoni ukutshintsha ibhodi okanye ukutshintsha ikhowudi?
IOS 8.1 ngoku iyafumaneka ukukhutshelwa